Diidmada qariibka ah ee Rio Ferdinand
Rio Ferdinand ayaa diiday inuu sheego in Manchester United ay ku guuleysan karto Premier League xilli ciyaareedkan isagoo ka baqaya in lagu maadsado dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Ferdinand ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay buunbuuninta Ole Gunnar Solskjær iyo sheegashada inuu ahaa furaha guusha United ka dib markii ay garaaceen Paris Saint-Germain tartanka Champions League bishii Maarso 2019 iyadoo tababaraha cusub ee reer Norway.
Waqtigaas, wuxuu yiri: “Saxeex qandaraaska, miiska keen, ha u qoro, ha u doorto inta lacag ee uu helayo iyadoo lagu saleynayo wixii uu qabtay tan iyo markii uu yimid.
“Ole wuxuu ku socdaa giraangiraha, wuxuu qabanayaa shaqadiisa, United way soo laabatay!”
Haatan, ku dhowaad laba sano ka dib, Ferdinand ayaa amaanay United ka dib markii ay garaaceen Watford si ay u gaaraan wareega afaraad ee FA Cup. Toddobaadka dambe, United waxay fursad u haysataa inay hoggaanka u qabato Premier League.
Ferdinand ayaa hada ka warqaba dhaleeceynta uu kala kulmay Manchester United guushii ay ka gaareen PSG markii qaab ciyaareedka United uu xumaaday.
Halyeeyga Manchester United ayaa yiri: “Waa toddobaad weyn, haddii ay ka adkaadaan Burnley, waxay hoggaanka la wareegi doonaan cadaadisna saari doonaan Liverpool.
“Isla markii aad u koreyso meesha ugu sareysa waad ku soo dagi kartaa. Spurs iyo Chelsea sidoo kale sare ayey fuuleen wuuna dhacay, dadkuna hada waxay dhahayaan tababarayaasha kooxahan shaqada waa laga ceyrinayaa. Ole waa nin khibrad leh oo aan wax badan arag taasi waa nolosha kooxaha waaweyn. ”
Ferdinand ayaa si buuxda uga fiirsanaya faallooyinkiisa, isagoo ka warqabaya saameynta xun ee hadaladiisa ka dib ciyaartii PSG, taasoo noqotay ‘meme’ oo si weyn loogu wadaagay baraha bulshada.
Ferdinand ayaa intaa ku daray: “Ma doonayo inaan u walaaco sidii hore.
“Ma doonayo in markale la igu jees jeeso, laakiin taageere ahaan waxaan noqon doonaa shucuur, xamaasad.
“Waxaan rajeynayaa in United ay hogaanka u heyso ka dib Burnley, boqolkiiba boqol waan ku qanci doonaa.
“Laakiin kulanka weyn ee nagu soo xiga oo aan la ciyaareyno Liverpool, ma aanan aheyn ciyaaro aan ku sheegno meel qaldan, laakiin waxaan nahay kuwa ugu horeeya ee doonaya inaan sii joogo
Garsoore Michael Oliver ayaa ku dhawaaqay xulkiisa